Cartridge sivana rivotra tsara indrindra ho an'ny mpamokatra sy ny angovo | Manfre
Ny sivana rivotra ho an'ny rafitra fidiran'ny rivotra ho an'ny turbine entona.
Ny fizotran'ny turbin-tsolika dia ny compressor (izany hoe ny compresseur) mitsoka tsy tapaka amin'ny rivotra avy amin'ny atmosfera ary mamehy azy; ny rivotra voafintina dia miditra ao amin'ny efitrano fandoroana, mifangaro amin'ny lasantsy voatsindrona ary mirehitra mba ho lasa etona maripana avo lenta, izay avy eo mikoriana mankamin'ny turbinin'ny entona Miasa ny fanitarana antonony, manosika ny kodiarana turbinina sy ny kodia compressor hiara-mihodina; nohatsaraina betsaka ny herin'ny fiasan'ny entona mafana be hafanana, koa raha mitondra ny compressor ny turbin-tsolika dia misy hery mihoatra ny herin'ny milina avoakan'ny turbine entona. Rehefa atomboka amin'ny fijanonana ny turbin-tsolika dia mila entin'ny mpanafika izy io mba hihodina. Tsy hiala an-tsokosoko ny mpanafika raha tsy efa haingam-pandeha ka afaka mihazakazaka tsy miankina.
Ny fizotran'ny turbinina entona no tsotra indrindra, izay antsoina hoe tsingerina tsotra; ho fanampin'izay, misy tsingerina famerenana amin'ny laoniny sy tsingerina sarotra. Ny tsiranoka miasa amin'ny turbinina entona dia avy amin'ny atmosfera ary avoaka amin'ny atmosfera, izay tsingerina misokatra; ho fanampin'izay, misy tsingerina mihidy izay ampiasaina ny tsiranoka miasa amin'ny tsingerina mihidy. Ny fampifangaroana turbine etona sy motera hafanana hafa dia antsoina hoe fitaovana tsingerina mitambatra.
Ny mari-pana entona voalohany sy ny tahan'ny famatrarana ny compressor dia ireo singa roa lehibe misy fiantraikany amin'ny fahombiazan'ny turbine entona. Ny fampitomboana ny mari-pana entona voalohany ary ny fampitomboana ny tahan'ny famatrarana dia mety hanatsara ny fahombiazan'ny turbinin'ny entona. Tamin'ny faran'ny taona 1970, ny tahan'ny famatrarana dia nahatratra 31 farafaharatsiny; ny mari-pana entin'ny gas turbine indostrialy sy an-dranomasina voalohany dia sahabo ho 1200 ℃, ary ny turbinina entona fiaramanidina dia nihoatra ny 1350 ℃.
Ny sivana rivotra azontsika dia mety hahatratra F9grade. Azo ampiasaina amin'ny turbine GE, Siemens, Hitachi.
Teo aloha: Sivana 3LA ho an'ny milina lamba lamba Barmag
Manaraka: Sivana labozia ho an'ny tsipika sarimihetsika BOPP
Carte sivana rivotra
Cartridge sivana anti-statika ho an'ny fanangonana vovoka
Sivana harato fonosana Extruder harato Disc miaraka amin'ny ...
Stainless vy pleated sivana singa sintere ...